ကလိုစေးထူး: လွတ်လပ်ခြင်း အစစ်..
should we happy or sad?
Jan 3, 2007, 10:46:00 PM
“လွတ်လပ်ခြင်းအစစ်”တေးသီချင်းလေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ နားထောင်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းလေးဖန်တီးပေးတဲ့ ကိုသံလွင်ကိုလည်း လေးစားပါတယ်ရှင်။
လွတ်လပ်ခြင်းအစစ်ကို ဘယ်တော့များမှ ရမလဲ …. လို့ အားလုံးက မျှော်လင့်နေပါတယ်။
Jan 4, 2007, 12:09:00 AM
very good sound and exactly true.
when will the independence be?
Jan 5, 2007, 6:14:00 AM